း ဟဲ့ . . ငါလဲမသိလိုက်ပါ ကွဲရို့
း မသိရှိမပေါ့ .. လာမှမလာတာကိုး
း အော် .. ငါနှယ့်နော် .. ဂေဟာစည်ပင်သိမ်းသွားပြီဆိုလို့ ငါ့အလုပ်ပျောက်ပြီဆိုပြီး
စကောဖိနပ်နဲ့တောထွက်တော်မူနေတာ လဟဲ့ .
မဖြစ်ဘူး မဖြစ်ဘူး အိမ်အသစ်ရောက်သွားတဲ့ဂေဟာကိုအမြန်ကြွမှပဲ
ပေါညီတစ်ယောက် ဂေဟာသို့ မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ဖြစ်သော ပြည်တွင်းဖြစ် BMW (Burma Mini Wagon)
ထော်လာဂျီ အားစီးနင်းပြီးရောက်ရှိလာခဲ့လေတော့...သတည်း။ (ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ)
နောက်ဖေးခန်းထဲဝင် ရေခဲသေတ္တာဖွင့် အရက်ပုလင်းလက်ကျန်ရှာဖွေရင်း ......
မမ - ဟဲ့ ပေါညီ နင်ဘယ်လိုများမတ်စိလည်လမ်းမှားရောက်လာတုန်း
ပေါညီ - အာ မမ ဒီနေ့ဘာချက်တုန်း
မမ - အ၇င်လို မုန့်ညှင်းပေါ ဟယ်
ပေါညီ - မမ ကလဲ ကောက်ရွေးပွဲ (အဲ မှားလို့) ရွေးကောက်ပွဲသာပြီးသွားတယ် မုန့်ညှင်းကမုန့်ညှင်းပဲလားဗျာ .
မမ - မုန့်ညှင်းပဲပေါ့ကွယ် .
+ မဖြစ်ခြေပြီ .. အထက်လူဂျီးတစ်ယောက်ယောက်ကို သွားပေါ အဲ သွားပြောဦးမှလို့ တက်သွားလိုက်ပါသည်+
ငတိ - ပေါညီ မင်းခုမှပဲပေါ်လာတော့တယ်
ပေါညီ - ဗျာ .. အစကတဲက ကျနော်က အဲ့ ၀န်ကြီးလေ
တွင်း ၁ - အရင်က ရာထူးက အရင်ကလေ ၊ အခု ရာထူးက အခုပေါ့ကွ
အရင်က မင်းကိုငါတို့ခန့်တာ ၊ အခု ကောက်ရွေးထားတဲ့လူ အဲမှားလို့ ရွေးကောက်ထားတဲ့လူတွေခန့်တာ
ပေါညီ - အော် အော် ၈လိုကိုး ..
အင်းပေါ့လေ ဂလိုဆိုတော့လဲ ၈လိုပေါ့လေ .. ရာထူးပြန်ရတာပဲကံကောင်းတယ်လိုမှတ်ပြီးသကာလ
အတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်ကာ ကြေငြာလိုက်ပါတော့သည်။
" မုန့်ညှင်းပဲစားပါတော့မယ်လို့ " (တိုက်ဆိုင်မှုများရှိလျင် တိုက်ဆိုင်သွားသည် ဟုမှတ်ကြပါရန်)
*ပေါသူ, ပေါပုံ *ကူသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး, သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
လျှောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ပေါငြိမ်၏ စာရင်းရှင်းတမ်း (နောက်တိုးဖြစ်သည်)
*ပေါသူ, ပေါပုံ *လျှောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး, ငွေစာရင်းရှင်းတန်း, ပေါဗီဒီယို
လျှောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ပေါငြိမ်၏ စာရင်းရှင်းတမ်း
ငပေါများဂေဟာ အိမ်သစ်တက်ပွဲအခမ်းအနား အစီအစဉ်
နာယကဂျီး။ ။ ဘာကွ...
ပေါငြိမ်။ ။ ဟုတ်... ဟုတ်ပါတယ် နာယကဂျီးရယ်
နာယကဂျီး။ ။ ဟုတ်တယ်ဆို မဟုတ်တော့ဘူး
ပေါငြိမ်။ ။ ဗျာ...
နာယကဂျီး။ ။ နင့်သတင်းက သေချာဟုတ်တယ်ဆို ငါတို့တွေတော့ အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူး ပြောတာ။ တယ်ဝေးတာပဲ...။
ပေါငြိမ်။ ။ ဟုတ်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ အိမ်ပြောင်းရမယ်ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ နာယကဂျီးရယ်
နာယကဂျီး။ ။ တော်စမ်းဟာ... နင်တို့ ဟို ဘီအမ်အေ ဆိုတဲ့ မြန်မာ့ပုလင်း သမဂ္ဂ (Bottle Myanmar Association) ကြီးက ငါတို့ကို ဆုချတယ်ဆို... အကယ်ဒမီဆို... တဲပေါ်ကနေ တိုက်ပေါ်ကို တင်ပေးတယ်ဆို... ဂုဏ်ပြုတယ်ဆို... ဆို... ဆို... ဆို !!!!!
ပေါငြိမ်။ ။ ဟုတ်၊ ဟုတ်ပါတယ် နာယကဂျီးရယ်... အဲဒါက ဟိုတုန်းကလေ... ခုဟာက...
နာယကဂျီး။ ။ တော်၊ တော်စမ်းဟာ... နင်တို့ လျှောက်လုပ်ရေးကို အိမ်ဆောက်ဖို့ ငါပေးထားတဲ့ ရန်ဘုန်းငွေတွေကော...
ပေါငြိမ်။ ။ ဟို... ဟို... ဟိုလေ... ချန်ထားရင် ရန်များမှာဆိုးလို့...
နာယကဂျီး။ ။ ဘာ... ဘာ...
ပေါငြိမ်။ ။ အာ... နာယကဂျီးကလည်း... နာယကဂျီးပဲ နယူးယီးယားမှာ မူးပြီးဟားမယ်ဆို... ဒါနဲ့ ကုန်ရောပေါ့...
နာယကဂျီး။ ။ တော်ဟာ... တစ်ယောက်မှ အဖြစ်မရှိဘူး။။ ကျန်တဲ့ ဝန်ကြီးတွေ၊ ငတိတို့ ငှက္ကဌတို့၊ အမှုရှောင်တို့၊ တွင်းတစ်၊ နှစ်တို့ တစ်ယောက်မှ အားကိုးရမယ်မရှိဘူး။ နည်းနည်းပါးပါး အိပ်ထဲက စိုက်ပြီး ဂေဟာလေး ကောင်းစားဖို့ ထည့်ဝင်ကြမယ် မရှိဘူး။ ဂေဟာကနေ ဘုန်းဖို့လောက်ပဲ သိတယ်။
ပေါငြိမ်။ ။ ခု မဘုန်းတော့ပါဘူး။ ဘတ်ငွေအဖြစ်ပဲ ပြောင်းလဲသုံးစွဲပါတယ်။
နာယကဂျီး။ ။ တော်တော်၊ နင်တို့ လုပ်ပုံနဲ့ နေပူတော်က သမ္မတအိမ်တော်ကြီးကလည်း ကမ္ဘာပျက်တောင် ပြီးမယ့်ပုံ မပေါ်ဘူး။ ကဲ… ဒီတော့ အိမ်ဟောင်းကိုပဲ ပြန်ပြောင်းဖို့ စီစဉ်... အခမ်းအနားကို...
ပေါငြိမ်။ ။ အရမ်းသနားသွားအောင်
နာယကဂျီး။ ။ ဘာ... ဘာ သနားသွားအောင်လဲ... သားနားသွားအောင်လုပ်စမ်းပါ... ဒါပဲ… နေ့ရက်၊ အချိန်၊ နေရာကို အမြန်ဆုံးကြေငြာပြီး ပွဲစီစဉ်...
ပေါငြိမ်။ ။ ဝုတ်ကဲ့ဘာခင်ည
ဤသို့ဖြင့် နာယကဂျီး၏ တိတ်တိတ်ပုန်း အမိန့်ပေးချက်အရ ငပေါများဂေဟာ အိမ်သစ်တက်ပွဲကို ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ကျင်းပရန် အောက်ပါအတိုင်း ကျွန်ုပ်လျှောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးပေါငြိမ်က အကြံပြုလိုက်ရပါသည်။
နေ့ရက်။ ။ နာယကဂျီး အားယားသည့်ရက်
အချိန်။ ။ ငပေါများ အိပ်ရာထသည့်အချိန်
နေရာ။ ။ ခရေးဇီးဘလော့ဂါဂရုပ်ဒေါ့ဘလော့ဂ်စပေါ့ဒေါ့ကွန်း
(၁) ဖွင့်ပွဲအနေဖြင့် အငဲ၏ အိမ်သီချင်းကို မော်ဒီဖိုင်းလုပ်ထားသော အောက်ပါ သီချင်းကို ငပေါများအားလုံး မညီမညာသောက်တလွဲ သီဆို ဖွင့်လှစ်ရန်။
ခုတလောမှာ ငါမက်တဲ့ အိပ်မက်တွေ အရမ်းထူးဆန်းတယ်
ငပေါတွေ အကယ်ဒမီရတဲ့ ဂေဟာကြီးက ပြောင်းရမယ်တဲ့
ပိုက်ဆံလေးတွေ မရှိတော့ကွယ် ငပေါတွေဘဝက ဆိုးလှတယ်
မနက်ဖြန် ဂေဟာကြီးက နေခဲ့တာ စာချုပ်ပြည့်တော့မယ်
လက်ထဲမှာ ဘယ်မှာလဲငွေ ထပ်ငှားပြီး ဒေါ့နက်ဝယ်ချင်တယ်
စိတ်ညစ်လည်း ဘာထူးမှာလဲ ငပေါတွေဘဝက မွဲလွန်းတယ်
အကောင်းဆုံး ပေါနိုင်ဖို့အတွက် ဂေဟာလေး လိုချင်မိတယ်
တစ်နေ့တော့ ငပေါတွေများအတွက် လုံခြုံတဲ့ အိမ်လိုချင်တယ်
တစ်နေ့တော့ တစ်နေ့ပေါ့ ဘယ်တော့လဲ မမေးလိုက်နဲ့ကွယ်
ဘယ်တော့မှ မဖြစ်လာ တော့ဘူးလို့ အားမလျှော့ပါနဲ့
ဒေါ့နက်လေးရယ် ပြေးနေဆဲ တို့အိပ်မက်တွေ ဝိုးတဝါးရယ်
အကောင်းဆုံး ပေါနိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းမျှော်လင့်ဆဲပဲ
တစ်နေ့တော့ ဒေါ့နက်လေးနဲ့ တည်ငြိမ်စွာနေချင်ပါတယ်။
မနက်ဖြန် ဂေဟာကြီးက နေခဲ့တာ တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်...
(၂) တစ်နှစ်ပြည့် အကယ်ဒမီရ ငပေါဂေဟာအား ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် နာယကဂျီးမှ အဖွင့် ပဏာမမိန့်ခွန်းအား ၃မိနစ်နှင့် ၅၆ စက္ကန့်တိတိ မြွက်ကြားရန်။ (သတ်မှတ်ချိန်ထက် ပိုယူလျှင် နာယကဂျီးအား ပုလင်းခွံများတီးပြီး မောင်းချရန်...)
(၃) အိမ်သစ်တက်ပွဲ အခမ်းအနားအနေဖြင့် ဂေဟာမှ ဧည့်ခံသော ပဲကြီးလှော်နှင့် ရေနွေးကြမ်းအား တန်းစီ ခွဲတန်းချ ဘူဖေးစနစ်ဖြင့် စားသုံးရန်။ (တန်းစီဘူဖေး = ကိုယ်တိုင်ထယူ တန်းစီရန်၊ ခွဲတန်းချ = တစ်ယောက်လျှင် ရေနွေးတစ်စက်နှင့် ပဲလှော်တစ်ခြမ်း)
(၄) တစ်နှစ်တိတိနေခဲ့သော ငပေါများဂေဟာအဟောင်းအား လွမ်းဆွတ်ခြင်း အထိန်းအမှတ်ဖြင့် ၃မိနစ်နှင့် ၅၆ စက္ကန့်တိတိ အသက်မရှူ လေမလည်ဘဲ စန့်စန့်ကြီး ရပ်ပြီး ဝမ်းနည်းခြင်း ပြသရန်။
(၅) အစီအစဉ် ပြီးဆုံးကြောင်း အနေဖြင့် နာယကဂျီးမှ “ပြီးပြီ ဒါပဲ” ဟူသော စကားအား သုံးကြိမ်တိတိ တိုင်ပေးရန်နှင့် ငပေါများအားလုံးက မညီမညာသောက်တလွဲ လိုက်လံအော်ဟစ်ရန်။
(၆) “လောင်းလစ်ဗ်သပေါ” ဟူသော စကားကို ၃ ကြိမ်ရွတ်ဆိုပြီး အခမ်းအနားကို ပိတ်သိမ်းရန်။
အထက်ပါ အစီအစဉ်များသည် ကျွန်ုပ်ပေါငြိမ်၏ အကြမ်းဖျင်း၊ ပဏာမ၊ ယာယီ၊ ခန့်မှန်း၊ မသေမချာ စီစဉ်ထားရှိမှုများဖြစ်သဖြင့် လိုအပ်သည်များကို လိုအပ်သလို အကြံပြုကြပါကုန်။
*ပေါသူ, ပေါပုံ *လျှောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး, ထုတ်ပြန်ချက်, နာယကဂျီး, ပေါကြေညာချက်
ငပေါ အိမ်ဟောင်းဆင်း၊ အိမ်သစ်တက် မင်္ဂလာ
ငပေါများဂေဟာ၏ အိမ်ဟောင်းမှာ အိမ်လခ ဆက်မပေးနိုင်တော့ပါသဖြင့် စည်ပင်က ပြန်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း မူးမူးရူးရူး တံခါးသွားခေါက်မည့် ငပေါများအား လည်းကောင်း၊ အိမ်ရှင်းမည်ဟု အကြောင်းပြကာ တံမြက်စည်းကြီး ကိုင်၍ ချောင်တွင် သွားအိပ်မည့် ငပေါများအား လည်းကောင်း၊ ဖဲဝိုင်းသွားထောင်မည့် ငပေါများအား လည်းကောင်း၊ ခွက်ပုန်း သွားကစ်မည့် ငပေါများအားလည်းကောင်း၊ ကျန် ငပေါများအား လည်းကောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ငပေါဂေဟာကို ခေတ္တယာယီအားဖြင့် နေပူတော်ရှိ သမ္မတ အိမ်တော်သို့ ရွှေ့ဆိုင်းကျူးကျော် နေထိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကြားကြားသမျှသော ငပေါအားလုံး သမ္မတအိမ်တော်တွင် ကြိုက်သလို သွားရောက် သောင်းကျန်းနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်း ကြားပါသည် (သေချာတာကတော့ သမ္မတ အိမ်တော်ကို စည်ပင်က သိမ်းစရာ အကြောင်းမရှိ) တကယ်လို့ မောင်းချမှာ စိုးရိမ်ကြရင်လည်း ငပေါဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံစာကို ငတိ၊ ငှက်ကထ၊ နာယကဂျီး၊ အမှုရှောင်၊ တွင်း ၁၊ တွင်း ၂ တို့ထံတွင် လာရောက်ယူကြဖို့ နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ယာယီအားဖြင့် သမ္မတအိမ်တော် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးပါက ယာယီ့ ယာယီအားဖြင့် ယခင် ကျူးကျော် ခဲ့ဖူးသော ဘလော့စပေါ့ ဒေါ့ကွမ် အမည်ရ အလကားပဲတင်း ကျူးကျော်တဲတွင် လာရောက် နေထိုင်ကြစေ လိုပါသည်။ ထိုတဲတွင် နာယကဂျီး အမှူးပြုသော ငပေါများ အိမ်သစ်တက် မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို နေပူတော်ရှိ လွှတ်ရင်တော်မည့် အခမ်းအနားကြီးနှင့်အပြိုင် ကြီးကျယ်စွာ ကျင်းပမည် ကြောင်း ငပေါအပေါင်းကို အကြောင်း ကြားအပ်ပါသည်။
ကျင်းပမည့် နေရာ - ငပေါဂေဟာ ဘလော့စပေါ့ ဒေါ့ကွမ် ... အင်္ဂလိပ်လို crazybloggergroup.blogspot.com
ကျင်းပမည့် အချိန် - ပေါငြိမ်ကို မေးရန်
ကျင်းပမည့်နေ့ရက် - လွှတ်ရင်တော်မည့် အခမ်းအနားနှင့် တရက်တည်း
ဦးဆောင်ကျင်းပမည့်သူ - ပေါငြိမ် (မှတ်ချက် - ဘာကျွေးမလဲဆိုတာလည်း ပေါငြိမ်ကိုမေးရန်)
နာယကဂျီး တာဝန်တော့ ပြီးပြီ။ ငပေါအပေါင်း ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။ လောင်းလစ်ဗ် သပေါစ်
*ပေါသူ, ပေါပုံ နာယကဂျီး, ပေါကြေညာချက်
တစ်နေ့သ၌ လျှောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ပေါငြိမ်သည် ဂေဟာတွေင် လုပ်စရာ မရှိသည်ဖြစ်၍ အင်မတန်မှ အားယားနေသောကြောင့် ဂေဟာရှေ့လမ်းမ ထွက်ထိုင်ပြီး မျက်စိအစာကြွေးနေစဉ်သကာလ လမ်းပေါ် ဟိုမှသည် သွားလာ လှုပ်ရှားနေသော (ရှုလို့မငြီး နတ်သမီးလေးများ တွေ့သည်ဟု မထင်ပါနှင့်) ခွေးလေခွေးလွင့်၊ ခွေးစုတ်ခွေးနာ အစရှိသည့် ခွေးတကာတို့ကို မြင်တွေ့လေတော့သည်။ ထိုသည့်အခါ မရေးရလျှင် ယား၍လာသော မိမိ၏ ကလောင်လက်ကို အယားဖြေခြင်း အလို့ငှာ အောက်ပါ ခွေး တစ်လုံးတည်း ဗဟိုပြုရေးထားသော “ခွေးသံသရာ” ပဒုမ္မာကြာ ကဗျာကို ရေးသား သမှု ပြုပြီး ဂေဟာနံရံတွင် ကပ်ထားခဲ့ပါကြောင်း။
*ပေါသူ, ပေါပုံ *လျှောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး, ပေါကဗျာ
ငပေါဂေဟာမှာ လက်လက်တောက် တစ်ယောက် လျှောက်လွှာတစ်စောင်နဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးပြီးကတည်းက ဘာမှမရေးတော့ဘဲ ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင် လုပ်နေတာကြောင့် စီနီယာငပေါများက (ဂျူနီယာငပေါမှ မရှိတာ) မျက်စောင်းထိုးနေ ကြပါပြီ။ (အမှန်ကတော့ ကျိန်ဆဲတဲ့အဆင့်ပါ ရောက်နေပါပြီ။) ဒါ့ကြောင့်မရေးမဖြစ်တစ်ပုဒ်လောက်တော့ ရေးဦးမှဆိုပြီး ငပေါဂေဟာထဲ လည်လည်ရောက်တော့... မမြင်စဖူး postတွေ ရေးထားကြတဲ့ မိုးသားနဲ့ချမ်းရဲကို တွေ့မိပါတယ်။ ကိုဟန်သစ်ငြိမ်နဲ့ဏာယကကြီးကတော့ ပေါနေကြ.. အဲလေ ရေးနေကျ ငပေါတွေပါ။
ဘာစိတ်ကူးပေါက်ပြီး crazyvilla ထဲ အလည်ရောက်လာတာလဲ မိုးသားရယ်။ မမြင်ဖူးတာကြာလှပေါ့။ (တကယ်တမ်းကို မြင်ကိုမမြင်ဖူးတာ)။ ငပေါအဖြစ်ကနေ စွန့်လွှတ်မယ်လို့ ခပ်တည်တည်ကြေညာထားတဲ့ ချမ်းရဲကလည်း ၀င်ပေါနေတော့ လက်လက်တောက်လည်း နည်းနည်းလောက်တော့ ၀င်ပေါ အဲလေ ၀င်ရေးဦးမယ်လို့ စဉ်းစားမိတယ်။
သတင်းအချက်အလက်နဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့လက်လက်တောက်က ဒီငပေါဂေဟာအတွင်းမှာ ရှိရှိသမျှငပေါတွေအကြောင်းကို အချင်းချင်းလှည့်ပတ်ပြီး အတင်းအုပ်နေကျပါ။ အခုတစ်ခါတော့ ခိုင်လုံတဲ့ငပေါရပ်ကွက်မှ ရရှိတဲ့ ငပေါသတင်းများကို ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
IT ၀ံဂျီးလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MRTV 25 နဲ့ MRTV 420 တို့မှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်သံလိုင်းနှစ်လိုင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံတကာ တင်သာမက စကြာဝဠာအတွင်းပါ တိုက်ရိုက်ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ လိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ငပေါဂေဟာဌာနချူပ်အတွင်းမှာ တည်ရှိတဲ့ MRTV 25 နဲ့ MRTV 420 တို့ရဲ့ Programming room တွင် နောက်ဆုံးပေါ် Cameraများ ၊ အသံဖမ်းယူမှုများ ပြုလုပ်နေကြပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ နိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ ငပေါတွေကလည်း TVများ ရှေ့မှာ ၀ါးရင်းတုတ်ကိုယ်စီနဲ့ (မကျေနပ်ရင် TV ရိုက်ခွဲဖို့နဲ့ လက်လက်တောက်ကို လာဆော်ဖို့) အသင့်အနေအထားနေရာယူထားကြပါသည်။
"မင်္ဂလာပါရှင် အခုချိန်ကစပြီး ငပေါဂေဟာသတင်းအဖြာဖြာအစီအစဉ်ကို စတင် တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းကြေညာရာမှာ နိုင်ငံတကာ ငပေါများသတင်းနဲ့ ပြည်တွင်းငပေါများ သတင်းဆိုပြီး အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီး ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုချိန်ကစပြီး ပြည်တွင်းငပေါသတင်းများကို ကြေညာပါမယ်ရှင်။
Crazyvilla ၏ သဘာငတိဖြစ်သူ ဖိုးဂျယ်သည် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်း၏ ဟင်းပေါင်းအစွမ်းဖြင့် နှစ်ပေါင်ခန့် ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာကြောင်း၊ သို့သော် H5N1 ဟုထင်ရသော ရောဂါတစ်မျိုးကို ယခုအခါခံစားနေရကြောင်း ကောလဟာလ သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ငပေါဂေဟာဌာနချူပ်မှ ဖဲထုပ်စပွန်ဆာ ပေးမည်ဖြစ်ကာ ကာစီနိုမမ ကိုယ်တိုင် ဒိုင်ကိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြေညာလိုက်ပါသည်။
ဖခမည်းတော်၏ မိန့်မှာချက်များအရ ချမ်းရဲသည် အလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ် ကျက်သရေရှိလှသော ငပေါဘ၀ကိုစွန့်လွှတ်ပြီး မိန်းမယူကာ မိန်းမလုပ်စာ ထိုင်စားမည်ဟု IT ၀ံဂျီးအား online တွင် ပြောကြားသွားသော်လည်း ယခုအခါ crazyvilla တွင် Post အသစ်တင်သဖြင့် ငပေါအပေါင်းက ဝေခွဲမရဖြစ်နေကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနေသော ဗီလိန်သည် ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲကြောင့် ပွပေါက်တိုးသွားသဖြင့် "This time for africa" သီချင်းဖြင့် Shakia ကဲ့သို့ ခဏခဏ အပျော်လွန်ပြီး ကနေကြောင်း ဖြစ်နိုင်လျှင် ထိုကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် လုပ်စေချင်ကြောင်း MRTV 420 သို့ပြောကြားသွားသည်။ ထို့ပြင်ငပေါဂေဟာနှစ်ပတ်လည် ညီလာခံတွင် Waka Waka သီချင်းဖြင့် Shakia ကဲ့သို့ လှုပ်ပြမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည့်အတွက် ငပေါအပေါင်းမှ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြကြောင်း အန္တရာယ် မိုးလေ၀သ သတင်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် တင်ပြအပ်ပါသည်။
ငပေါဂေဟာ ဏာယကကြီးဖြစ်သူကို တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးသော လက်လက်တောက်ခမျာ စီနီယာငပေါများ၏ မိန့်ကြားချက်အရ အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် လက်သီးလက်မောင်းတန်းနေသော ရုပ်ဆိုးဆိုးသူများကို မြင်တိုင်း ဏာယကကြီးပေလောဟု လိုက်ကြည့်မိကာ ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး ပေါညီသည် ယခုဖြေဆိုရမည့်စာမေးပွဲတွင် IT ၀ံဂျီး၏ နည်းပညာအကူအညီများဖြင့် ခိုးချကူးယူ ရေးသားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အခန်းစောင့် ဆရာမများအား သူကူးရေးသည်ကိုဖမ်းပါက အိမ်ရှေ့လာပြီး ဗြောက်အိုးဖောက်မည်ဟု စစ်ကြေညာထားကြောင်း မီဒီယာများသို့ အသိပေးပြောကြားသွားပါသည်။
အလားတူပင် အမှုရှောင်နန်းညီသည် အဲယားကွန်း ခန်းထဲတွင် ချောင်းဆိုးကာ တုပ်ကွေးဖြန့်သည်ဟု ကောလဟာလများ ထွက်ပေါ်နေခြင်းအပေါ် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်လေသည်။ သူသည် ဒီဖြစ်ရပ်ကို မတော်တဆ တမင်သက်သက် တိုက်ဆိုင်ကာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အေးအတူ ပူအမျှဟူသော စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ထိုသို့မျှဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဖြစ်နိုင်လျှင် online တွင်ပါ ဝေငှပေးလိုကြောင်း မီဒီယာများသို့ အသိပေးပြောကြားသွားသည်။
ယခုအချိန်မှစပြီး နိုင်ငံတကာငပေါသတင်းများကို စတင်ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ပြည်ပက ကာစီနိုမမသည် ငပေါတစ်ချို့အပြိုင်အဆိုင် ဘောင်းဘီချွတ်နေကြသော်လည်း မမကတော့ ဘယ်တော့မှ မချွတ်နိုင်ဟု ဖော်ပြ အဲလေ တင်ပြ (ပိုဆိုးကုန်ပြီ) ပြောကြားသွားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ငပေါများမှ ၀မ်းသွားပါကြောင်း (မှားတွားရို့) ၀မ်းနည်းပါကြောင်း ပြောကြားလေသည်။
အသင်းသားဂျူပ်ဖြစ်သော မမခေါင်သည် ယခုအခါ လေယာဉ်စပယ်ယာအဖြစ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိရာ အဆင်ပြေလျက်ရှိကြောင်း၊ ယခုသီတင်းကျွတ်တွင် စီနီယာငပေါများအား လေယာဉ်တစ်စီးစီး ကန်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဌက္ကဋ္ဌ၊ ဏာယကကြီး၊ တွင်း(၁)၊ တွင်း(၂) နှင့် သဘာငတိတို့မှာ သီတင်းကျွတ်အား စောင့်မျှော်နေကြောင်း ခိုင်လုံသော သတင်းရပ်ကွက်မှ ကြားသိရပါသည်။
နောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့် ငပေါဂေဟာ၏ ရှိရှိသမျှအတင်းအဖျင်းတွေကို ကြေညာသွားသော လက်လက်တောက်သည် စီနီယာငပေါများ၏ ၀ိုင်းသမမှုကိုကြောက်လန့်သောကြောင့် ဒီအစီအစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့် လစ်ပြေးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်ရှင့်။
*ပေါသူ, ပေါပုံ *အတင်းနှင့်နီးပြင်ညာဝန်ကြီး, ပေါသတင်း
ငပေါဂေဟာ ၂ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား
နေရာ။ ။ ငပေါဂေဟာ
အချိန်။ ။ ညီအကို မသိတသိအချိန်
အကြောင်းအရာ။ ။ ငပေါများဂေဟာ ၂ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား
တက်ရောက်သူများ။ ။ ငပေါများ
အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းယူသူ။ ပေါငြိမ်
ပျံဝံ။ ။ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ညာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ငပေါများ ဂေဟာဟာ ဆိုရင်ဖြင့် အခုဆိုရင် အသာဖယ်ထားလို့ မရတဲ့ နှစ်ခါလည်သားလေး ဘဝကို ရောက်ရှိလို့ လာတာ လူချီးမြင်းများ အားလုံး အသိပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ငပေါများဂေဟာကြီးဟာ အခုဆိုရင် ပေါခြင်းတွေတိုးပွားလို့ ငပေါသတင်း ငပေါချင်းဆောင်လို့ သိပ်မကြာသေးခင်က အကယ်ဒမီဆုကြီးကိုတောင် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူးခဲ့တာ အားလုံးအသိပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တက်ရောက်လာသူများ။ ။ သိရင်လည်း ဘာလို့ ထပ်ပြောနေတာလဲ။ အချိန်ကုန်တယ်ကွာ။
နာယကဂျီး။ ။ အားလုံးတိတ်စမ်း... !!!!
နာယကဂျီးအော်သံအဆုံးမှာပဲ ပေါင်ချိန်ကားထဲကလို “ဝေ... ဝူ...” အသံကြီးထွက်လာပြီး အားလုံးတိတ်သွားသည်။
ပျံဝံ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ အားလုံးသိကြသလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့်ပဲ ခု ဆိုရင် ၂ နှစ်ပြည့်လာပြီ ဖြစ်တဲ့ ငပေါများ ဂေဟာအတွက် အခမ်းအနားတစ်ခု စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပဖို့အတွက် အခုလို အစည်းအဝေးဖိတ်ခေါ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိတ်စာထဲမှာလည်း ပါတော့ အားလုံးလည်း သိပြီး ဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် အခုလို အစည်းအဝေးကြီးမှာ...
တက်ရောက်လာသူများ။ ။ ဟာ... တယ်လေရှည်တဲ့ ပျံဝံပဲ... ပြောစရာမရှိလည်း ဆင်းကွာ၊
တက်ရောက်လာသူများ။ ။ အေး... ဟုတ်တယ်။ အက်ကြောင်းထပ် ဓာတ်ပြားဖွင့်မနေနဲ့၊ ဆင်းဆင်း...
ဆင်းကွ၊ ဆင်းကွ၊ ပျံဝံ ဆင်းကွ။။။
နာယကဂျီး။ ။ ပျံဝံ... နင်ဆင်းခဲ့တော့။ အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ ငါတက်ပြောမယ်။
ဒီလိုနဲ့ တိုက်ပုံကြီးတကားကားနဲ့ ပျံဝံလည်း ဟန်လုပ်ချိန်မရဘဲ ဆင်းလာရတော့တယ်။ နာယကဂျီးက စင်ပေါ်တက်ခါနီး သူ့ခေါင်းကို ဒေါက်ခဲနဲ လှမ်းခေါက်ပြီး တက်သွားသည်။
နာယကဂျီး။ ။ ငပေါများအားလုံး မင်္ဂလာပါ။
တက်ရောက်လာသူများ။ ။ မကလာပင်...
နာယကဂျီး။ ။ အခုလို အဝေးအစည်းမဟုတ်ဘဲ အစည်းအဝေးဖြစ်အောင် စုံညီစွာနဲ့ တက်ရောက်လာတဲ့ ငပေါများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်။ ဒီနှစ် အခမ်းအနားကို ခမ်းနား၊ ဆန်းပြားသွားအောင်... ဝမ်းသွား... အဲ… သီးခံပါရှင်။ ခမ်းခမ်းနားနား ဖြစ်အောင် ပြဇာတ်ကရင် ကောင်းမယ်လို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဘယ်လိုများ သဘောရကြပါသလဲ။
တက်ရောက်လာသူများ။ ။ ကောင်းပါတယ်၊ ကောင်းပါတယ်။ ထောက်ခံပါတယ်၊ ခေါက်တံပါတယ်။။။
နာယကဂျီး။ ။ ခုလို အားလုံးသဘောတူတဲ့အတွက် ပြဇာတ်ကဖို့ စဉ်းစားကြပါမယ်။ ပြဇာတ်အတွက် ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်အိမ်တွေကို အားလုံးက တာဝန်ယူပြီး ကိုယ်နိုင်ရာကဏ္ဍကနေ တာဝန်ယူကြပါလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
ပေါငြိမ်။ ။ ရေးတာက ဟုတ်ပါပြီ။ ဘယ်လို ကကြမှာလဲ ဇာတ်လမ်းက ဘာအကြောင်း ရေးရမှာလဲဗျ။
နာယကဂျီး။ ။ အကြောင်းအရာက ဒီလိုပါ။ ခုဆို ငပေါဂေဟာ ၂ နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ ငပေါဂေဟာရဲ့ သမိုင်းကို ပြဇာတ်ကရမှာပေါ့...။
ပေါငြိမ်။ ။ သမိုင်း... ဟုတ်လား၊ သမိုင်းဆိုရင် ပျင်းစရာကြီးပေါ့ ပြီးတော့ ဘယ်လိုမျိုး ဇာတ်အိမ်တွေ၊ ဖရိန်တွေချမှာလဲဗျ။ ခုခေတ်က အက်ရှင်တို့၊ ရိုမန်းတစ်တို့၊ ဒါမှမဟုတ် ဟော်ရာ ဆိုလည်း မဆိုးသေးပါဘူးဗျာ။
နာယကဂျီး။ ။ တယ်။ ငပေါဖြစ်ပြီး ဒုံးဝေးလိုက်တာ။ တို့ငပေါတွေကိုပဲ အချာပင် မှတ်နေလား ပေါငြိမ်။ ဘယ်လို လုပ် တက္ကသိုလ် ဝင်တန်းအောင်ခဲ့တာလဲကွယ်၊ သမိုင်းဆိုတာ မေ့ထားအပ်တဲ့ အရာဟုတ်ဘူးလေ။
ပေါငြိမ်။ ။ သိဘူးဗျာ။ ကျုပ်တို့က သင်ချင်လို့ သင်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူး။ သိပ်လည်း စိတ်ပါတာ မဟုတ်ဘူး။
နာယကဂျီး။ ။ ကဲကဲ။။။ မသိတော့လည်း ပြောပြရမှာပေါ့... အားလုံးသေချာနားထောင်ကြ... ခုပြောသွားတဲ့ ဇာတ်လမ်း ဖရိန်ကို အခြေခံပြီး ကကြတာပေါ့ကွယ်။ အဲ တစ်ခုတော့ ပြောမယ်။ နာယကဂျီးရေးတဲ့ သမိုင်းလို့တော့ မမှတ်ပါနဲ့။ သမိုင်းလို့ပဲ မှတ်ပါ။
ပေါငြိမ်။ ။ ဟုတ်ပါပြီ။ သူလုပ်ချင်ရာ လုပ်ပြီးမှ ခေါင်းရှောင်ဦးမယ်ပေါ့...။
နာယကဂျီး။ ။ ကဲ... ကဲ၊ သေချာနားထောင်ကြ ကလေးတို့... အဲ... ငပေါတို့။ တို့ ငပေါတွေဟာ အချာပင်တွေ ဟုတ်ဘူးကွဲ့၊ မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့၊ ငပေါဇာတိနဲ့ လာခဲ့တဲ့ သူတွေပေါ့။ တို့ငပေါ ဘိုးဘွားတွေဟာ ပေါချစ်စိတ်ဓာတ် ထက်သန်စွာနဲ့ ကိုယ်ပိုင် ငပေါမှု၊ ကိုယ်ပိုင်ငပေါရာတွေကို ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြတယ်လေ။
ဒီလို ကိုယ့်ပေါကိုယ့်လမ်းနဲ့ အုပ်ချုပ်နေတဲ့တို့ ဂေဟာကို နယ်ချဲ့ လူတည်တွေက ကျူးကျော်ဝင်ရောက် လာခဲ့တယ်လေ။ သူ့ကျွန်ဘဝအောက်မှာ သူ့ဆန်စားလို့ သူ့စပါလုံးကောက်ပေးခဲ့ရတဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်လေ။ ငပေါစာပေ၊ ပေါမှု၊ ပေါရာတွေကိုလည်း သင်ကြားခွင့် ကောင်းကောင်း မရခဲ့ကြဘူးပေါ့ကွယ်။
ဒီလို လူတည်တွေရဲ့ ကျွန်သဘောက် ဘဝအောက်မှ နေရတာကို နည်းနည်းမှ မနှစ်မြို့တဲ့ ပေါချစ်စိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်တဲ့ တို့ ငပေါဘိုးဘွားတွေဟာ အဲဒီလူတည်တွေကို လက်နက်တွေ၊ လက်ဖြူတွေ ကိုင်ပြီး တော်လှန်ခဲ့ကြတယ်လေ။ ဒီလိုနဲ့ ပေါသွပ်ရေးကြီးကို ရရှိပြီး တို့ ငပေါဂေဟာကြီး ဆိုပြီး ဖြစ်တည်လာတာပေါ့။
သဘာငတိ။ ။ ဟုတ်ပါပြီလေ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က ဘယ်လို ကရမှာလဲ။ အဲဒီလို ပေါတောတော သမိုင်းကြီးကို...
နာယကဂျီး။ ။ တယ်၊ တယ်ခက်တာပဲ။ ခုနက ပြောပြတာက အကြမ်းဖျင်းလေ၊ ခြုံပြီး ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြဇာတ်ကို ၃ ပိုင်းခွဲပြီး ကလို့ ရမယ်။
ကိုယ့်ပေါကိုယ့်လမ်းနဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ကာလရယ်
လူတည်တွေရဲ့ သူ့ကျွန်ဘဝအောက်မှာ နေရတဲ့ ဘဝရယ်
ပေါသွပ်ရေးကြီး ရရှိတဲ့ ကာလဆိုပြီး သုံးခုပေါ့။
အဲဒီ သုံးပိုင်းမှာမှ ခုနက ပေါငြိမ် ပြောသွားသလို... အက်ရှင်တွေ၊ ရိုမန်းတစ်တွေ၊ ဟော်ရာတွေ လုပ်ကြတာပေါ့လေ။။။
ပေါညီ။ ။ ဟော်ရာဆိုတော့ ဟိုဟာ၊ ဒီဟာ ဖြတ်တာတွေ ပါမှာပေါ့နော်၊ ညီက ကြောက်တတ်လို့ပါ။
ပေါဂျယ်။ ။ ဟ၊ ရိုက်မှတော့ သဏ္ဍာန်လုပ် သရုပ်တူရတော့မှာပေါ့။
ပေါညီ။ ။ ဘြား၊ ဘြား... ဒါဆိုရင် ပေါညီကို သရဲပေးလုပ်...
ပေါဂျယ်။ ။ အောင်မယ်၊ တော်တော် တရားတယ်၊ ရမလား၊ ဇာတ်လမ်းအရ ကျရာနေရာ နင်ကရမှာပေါ့။ ပြီးတော့... သရဲဖြစ်ချင်ရင် ကားတိုက်ခံရတဲ့ အခန်းတို့၊ ဆယ်ထပ်တိုက်ပေါ်က ခုန်ချတာတို့ နင်အရင် လုပ်ရမှာလေ... လုပ်မှာလား။
နာယကဂျီး။ ။ ကဲ၊ ကဲ။။။ တော်ကြပါလေ။။ ပေါငြိမ်မေးတဲ့ ဇာတ်လမ်း ဖရိန်ကို ရပြီလေ...။ ဒီတော့ ဘယ်သူတွေက မင်းသားလုပ်ကြမယ်။ ဘယ်သူတွေက မင်းသမီး လုပ်မယ်၊ ပြီးတော့ ကင်မရာမန်းတွေ၊ ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတင်မယ့် သူတွေက ဘယ်သူတွေ လုပ်ကြမှာလဲ။ ဇာတ်ရံတွေ၊ ဇာတ်ပို့တွေ၊ ဇာတ်ခေါင်းတော့ ကွဲလို့ မဖြစ်ချေဘူး။ ဝိုင်းစဉ်းစားကြဦးလေ။။။
ဗီလိန်။ ။ ဟာ... ဒါကတော့ ဇာတ်လမ်းရေးပြီးမှပဲ ပုံပေါ်တော့မှာပေါ့ဗျ။
နာယကဂျီး။ ။ ဒါဆိုရင်လည်း လုပ်ကြ၊ ဇာတ်လမ်းကို အမြန်ရေးကြ၊ မနက်ဖြန်၊ သန်ဘက်ခါ အမြန်ဆုံး ဂေဟာမှာ လာတင်ကြ ဒါပဲ။ ရေဗူးပေါက်တာ မလိုချင်ဘူး။ အဲဒီဗူးထဲ အရက်ပါလာတာပဲ လိုချင်တယ်။ ဒါပဲ။
ပြောပြီးတာနဲ့ နာယကဂျီးမှာ ချက်ချင်းပဲ အစည်းအဝေးခန်းမမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားလေသည်။ ထိုအချိန်မှာပဲ ပျံဝံက စင်ပေါ်သို့ ပြန်တက်လာလေသည်။
ပျံဝံ။ ။ အခုလို... နာယကဂျီးရဲ့ အကြံပြု ပြောကြားချက် အပြီးမှာ ကျွန်တော်က... အဲ...
နာယကဂျီး ထွက်သွားပြီ ဖြစ်သဖြင့် ကျန်ရှိနေသော ဝံကြီးများ အဖွဲ့သားများလည်း အလျှိုလျှိုဖြင့် ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် လစ်ပြေးကုန်ကြရာ စင်ပေါ်တွင် ပျံဝံတစ်ဦးတည်းသား ငေါင်တောင်တောင် ကျန်ရှိတော့သဖြင့် ငပေါဂေဟာ ၂နှစ်ပတ်လည် ပဏာမအစည်းအဝေးကြီးကို လူမသိ၊ သူမသိ တိတ်ဆိတ်စွာ ပိတ်သိမ်း လိုက်ရပါတော့သည်။
*ပေါသူ, ပေါပုံ *လျှောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး, တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ, နှစ်ပတ်လည်ဆောင်းပါး
တေးရေး - ဗီဗီ/ တေးဆို - ဝိုင်းထုဘိုင်သိမ်း
ဖဲဝိုင်း ဘေးနားမှာ နေတဲ့ ခဏ
သောက်လိုက် မူးလိုက်နဲ့ တို့ငပေါများနဲ့
ရင်းထားတဲ့ လက်စွပ်ကလေးတွေ အခိုးငွေ့ဖြစ်ကာရယ်
ကင်းကုလားတွေ တန်းကာ စီကျတယ်
မနေ့က မင်းသတင်းတွေ တို့ကြားလည်း
အမြဲတမ်း ဆနဲ့ကွယ် ဒိုင်စားသွားခဲ့တယ်
အားလုံးက စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ သတိပေးကြပေမယ့်
ဖဲတက်မယ် ရင်မှာ ယုံထားမယ်
ငပေါဂေဟာနဲ့ ခွဲခွာဖို့/နေဖို့လည်း မရဲပါဘူး
ဖဲက သိပ်ခက်တဲ့ အရာလေးပဲ
ကိုးမီး ရှိုးဝိုင်းနဲ့ ဘူကြီးလည်းရှိတယ်
ပိုကာဝိုင်းများစွာထဲမှာ အုန်းသီးလည်း ခွဲပါတယ်
ရေးသူ - တွင်း ၁ (မှတ်ချက် - ဖဲဝိုင်းက အပြန် စိတ်ကူးသန်၍ ဤသီချင်းလေးကို ရေးလိုက်သည်။ တင်သူ - နာယက (မှတ်ချက် - ဘယ်သူ့မှ ခိုင်းမရသဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ခိုင်းလိုက်သည် :P)
*ပေါသူ, ပေါပုံ တွင်း ၁, ပေါသီချင်း
ပေါဿန (ဝါ) ပေါလော်ဆော်ဖီများ
သီတင်းကျွတ်အမီ ဂေဟာ ရန်ဘုံးငွေ ရှာရန် အလို့ငှာ နံရံကပ် ပေါဆောင်ပုဒ်များကို စေတနာရှေ့ထား ဖြန့်ချိလိုက်ရပါသည်။ (မှတ်ချက်။ ။ Buy one get one free စနစ်ဖြင့် တစ်ခုဝယ်ယူသူတိုင်းအား တစ်ခု လက်ဆောင်ပေးပါသည်။)
(ငပေါများ ညီလာခံ ၂၀၀၈ တွင် အတည်ပြုပြီးသား)
(ခွက်စောင်း = ခွက်ပုန်း + မျက်စောင်း)
(ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပေါနေမှန်း၊ ရူးနေမှန်း သေချာကွဲပြား မသိသူများ ဒီဆောင်ပုဒ် အိမ်တွင် ချိတ်သင့်သည်။)
*ပေါသူ, ပေါပုံ *လျှောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး, ပေါဿန
ပေါသတင်းများအတွက် ဆီဗုံးတစ်ခု ပြုလုပ်ထားပြီး မည်သူမဆို သတင်းများကိုသာ တင်ပြပေးကြရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ဤငပေါများဂေဟာတွင် အဖွဲ့ဝင်များ များပြားလာသည် နှင့်အညီ ပို့စ်များလည်း များပြားလာသဖြင့် ပို့စ်ဖောင်းပွမှုများ မဖြစ်စေရန် စာမူများ ပေးပို့မှုကို အကဲဖြတ်ဆင်ဆာ အဖွဲ့မှ စိစစ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် မိမိပို့စ်များ တင်ပြခြင်းမရှိပါက နားလည်စွာ လက်ခံပေးကြရန် ကြိုတင်အသိပေး တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ပေါသတင်းများ (CBG သတင်းဌာန)
၁- crazybloggergroup@gmail.com သို. ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
၂- မည်သည့်အကပ်နဲ့မျှ လက်ခံမည်မဟုတ်ပေ။ *ချွင်းချက်-မဒမ်များမှခိုင်းလျှင်*
၃- အပေါစံချိန် မမှီပါက ထည့်သွင်းဖေါ်ပြမည် မဟုတ်ပါ။
ရူးပေါဂိုဏ်းကြီးမှာ ဂိုဏ်းသားများ များပြားလှပါသောကြောင့် စာမူများ ဘလော့ပေါ်တင်သောအခါ လေဘယ်နေရာတွင် မိမိ၏အသင်းဝင်ရာထူး သို့မဟုတ် အသင်းဝင်အမှတ်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်..
လိုအပ်ပါက အဖွဲဝင်လူကြီးများမှ ပြင်ဆင်ပေးသည်ကို လက်ခံပါရန် ကြိုတင်အသိပေး တင်ပြအပ်ပါသည်။